यादव देवकोटा - कान्तिपुर समाचार
सामन्त गुठी कि सरकार ?
चर्को नागरिक प्रतिवादले जनआन्दोलनको बाटो समातेपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लियो । समानान्तर रूपमा सत्ताधारी नेकपाले आफ्ना नेता–कार्यकर्ता परिचालन गरेर गुठी विधेयकविरुद्ध आन्दोलनरत काठमाडौंका जनता चिढ्याउने गरी दाङ, सिन्धुपाल्चोक लगायतमा गुठीका पक्षमा जुलुस निकाल्यो ।
नेतृत्वमा सामन्तवादी चिन्तन
युक्रेनका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भोलोदमिर जेलेन्स्कीले पदभार ग्रहणपछिको सम्बोधनमा भनेछन्– ‘राष्ट्रपति कुनै आइकन होइन, न मूर्ति हो राष्ट्रपति, न त पोट्रेट नै । त्यो ठाउँमा तपाईंका बच्चाका तस्बिर राख्नुस् । अनि हरेक निर्णय गर्नुपहिले उनीहरूका आँखामा हेर्नुस् ।’
यादव देवकोटाका लेखहरु :
क–कसले मिचे टुँडिखेल ?
लिच्छविकालीन समय  । पुरानो काठमाडौं सहरभन्दा बाहिर, पूर्वपट्टिको लम्बेतान चौर  । जो ‘लायकुपुई’ बाट मुस्किलले साढे तीन सय पाइलाको दूरीमा अरू जमिनभन्दा अलिक उठेको ढिस्कोजस्तो भएर बसेको थियो । फराकिलो खुला जमिनको सहरवासीका लागि एकसाथ अनेक उपादेयता थिए । घरपालुवा जनावर चराउने, केटाकेटी खेल्ने, विशेष जात्रा र उत्सवहरू मनाउने प्रयोजनका लागि उक्त खुला जमिनको उपयोग हुन्थ्यो ।
बुधबार बिहानै धादिङको नौबिसेलाई केन्द्र बनाएर ५.२ रेक्टरको भूकम्प गएपछि सामाजिक सञ्जालमा आएकाअनेकौं टिप्पणीमा कसैले लेखेको छ– ‘भूकम्पले तर्साउन छाडेको छैन । हामीले आपतविपतमा उभिन मिल्नेसम्मको ठाउॅ पनि नछोडी खुला स्थान साँघुर्‍याउॅदै गएका छौं । २०७२ कै उत्पात दोहोरियो भने हाम्रो हालत झन् खराब हुनेतिर गइरहेछ ।’
आखिर सिंहदरबारमा के छ, जसले मै हुँ भन्नेलाई पनि बदलिदिन्छ ? सत्तामा नपुगुन्जेल हाे ठूला कुरा, सिंहदरबार पुगेपछि नेता औकातमा आउँछ । दशकाैं संघर्ष गरेर, बलिदानकाे राजनीति गरेर सिंहदरबार पुगेकाे नेता वर्ष दिनमा असली हैसियतमा प्रकट भयाे ! के छ सिंहदरबारकाे पाठशालामा जसले कलुषित बनाउँछ आफ्ना चेलाहरुलाई ?
पूर्वार्द्ध पुराना स्मृतिहरू भन्छन्– काठमाडौं सहर निकै सानो थियो । दरबारको धुरीबाट सारा जनताको घरबाट धुवाँ पुत्पुताएको हेर्न सकिन्थ्यो र कसले खान पाए या पाएनन् भनी निर्क्योल गर्न सकिने आकारको थियो । अनिमात्रै भोजन गर्थे, राजा । जनताको तलबितलको भोकपीरको ख्याल थियो, शासकमा । धेरै पहिलेको आदिम कथा होइन, मल्लकालमै थियो यस्तो, लेख्छन् इतिहासकारहरू ।
गंगालाल श्रेष्ठलाई अंश सर्वस्वसहित फाँसीको सजाय सुनाएपछि भनियो, ‘उमेर कलिलै भएकाले माफी मागे आजन्म कारावास ।’ गंगालालले तुरुन्तै हाँक दिए, ‘कसैले बक्स दिएको ज्यानलाई स्वीकार गरेर बाँच्दिन ।’ तुरन्तै उनलाई फाँसीकै सजाय सुनाइयो । त्यस्तै, अंश सर्वस्वसहित फाँसीको सजाय सुनाइएपछि ठूलठूलो स्वरले हाँस्दै दशरथ चन्द गर्जिए– ‘फाँसी क्या चिज है ?’